DAAWO SAWIRADA: Saraakiil Maraykan ah oo tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan Milateriga Somalia | Wakaaladda Wararka Hiilnews
DAAWO SAWIRADA: Saraakiil Maraykan ah oo tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan Milateriga Somalia
Baladweyne(HNN) Ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya ayaa tababar kor loogu qaadayay aqoontooda loogu soo gebagebeeyey magaalada Muqdisho kuwaasoo isugu jiray saraakiil, saraakiil xigeeno iyo dabley.
Munaasabadan xiritaanka tababarkan ayaa waxaa goob joog ka ahaa Wasiirka Difaaca Soomaaliya, Saraakiil ka tirsan ciidamada Maraykanka oo tababarkasi muddo bil ah bixinayey iyo madax kale.
Wasiirka Gaashaaindhiga Soomaaliya C/rashiid C/llaahi oo ciidankan u soo xiray tababarka ayaa bogaadiyay, wuxuuna kula dardaarmay in in waxyaabihii ay barteen ay dalka ugu adeegaan.
“Howsha la idin tababaray waa mid dhaxalgal ah, isla markaana anfici doonta ciidamada xooga dalka, looguna talagalay inaad howlaha ciidanka ku tayeysaan” ayuu yiri wasiirka difaaca Soomaaliya.
Taliyaha hogaanka taakulaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jen. Bile Ibraahim Aadan ayaa uga mahad-celiyay saraakiisha Mareykanka ah tababarkan ay siiyeen cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka.
Tababarkan ayaa la xiriiray habka diiwaanka gelinta iyo tirakoobka loogu sameeyo ciidamada, iyadoo la wada ogyahay in madaxda dowlada ay mudooyinkan dhibaato ka heysatay sidii ay u ogaan lahaayeen tirade saxda ah ee ciidamada.